चुम्बन गर्नुका फाइदै फाइदा
चुम्बनलाई हरेक तरिकाले व्याख्या गर्ने काम गरिन्छ । सम्बन्ध मजबुत बनाउन पनि चुम्बनले ठुलो भुमिका खेलेको हुन्छ ।
आफ्नो पाटर्नरलाई रोमान्टिक मुडमा ल्याउन भन्दा पनि बढी यसले स्वास्थ्यमा ठुलो लाभ दिने गर्छ । यदी तपाई आफ्नो रोगलाई कम गर्न, कुनै पनि सम्झनायोग्य बनाउन, थकान भगाउन चुम्बनले सहायता गर्छ ।
चुम्बन गर्नुका फाइदाहरु
स्वस्थ हृदय बनाउन मदत गर्छ
एड्रेनालिन हर्मोनले शरिरमा रक्तसर्चार गर्न मदत गर्छ । जब तपाई आफ्नो पार्टनरलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ तब यसको स्तर बढ्ने गर्छ । यसका कारण शरिरमा अधिकमात्रामा रक्त सञ्चार हुनेगर्छ । यतिमात्र नभइ यसले रगतमा एपिफ्रीन पनि छोड्नेगर्छ जसका कारण जसका कारण रक्त संचार छिटो हुने गर्छ । यस बाहेक चुम्बनले रक्तचाप कम गर्ने काम गर्छ ।
२. तनाबबाट मुक्त गराउने काम गर्छ
दिनमा तपाई कतिपटक थकान तथा अस्वस्थ भएको महसुस गर्नुहुन्छ ? यदी यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ भने तपाईको शरिरमा कोर्टिसोल हर्मोन कारण तपाईलाई यस्तो भएको हुनसक्छ । चुम्बनले शरिरमा कोर्टिसल हर्मोन कम गर्ने काम गर्छ । मस्तिष्कमा सेरोटोनिन हर्मोनको स्तर बढाउने काम गर्न । आक्सीटोसिन हर्मोनको स्तर कम हुदाँ चिन्ता पनि कम भएर जान्छ ।
३. प्रतिरक्षा प्रणालीमा सुधार ल्याउने काम गर्छ
जब तपाई आफ्नो पाटर्नरलाई चुम्बन गर्नुहुन्छ, तब तपाईको प्रतिरक्षा प्रणाली पनि बलियो हुनेगर्छ । जर्नल मेडिकल हाइपोथेसिसका अनुसार चुम्बनले महिलाहरुलाई धेरै फाइदा गर्छ । कुनै संक्रमित पाटर्नरलाई किस गर्दा सितोमेगालो वायरसविरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता बन्ने बताइएको छ ।
विल्केश विश्वविद्यालयको अनुसन्धानका अनुसार चुम्बनले शरिरमा संक्रमणसँग लड्ने एन्टीबडी इमुनोग्लोबिन ए को स्तरको विकास गर्ने जसका कारण रगतमा हिस्टामिनको स्तर पनि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको छ ।
४. फिट रहन मदत गर्ने
प्रति चुम्बनमा ८ देखि १६ क्यालोरी खर्च हुने गर्छ, त्यस्तै २० सेकेण्डको कामुक चुम्बनले २ देखि ३ क्यालोरी खर्च गर्ने काम गर्छ । त्यसैका कारण पनि शरिर फिट रहन मदत गर्छ ।
५. दुखाइ कम गर्ने काम गर्छ
जब तपाई प्यासोनेट किस गर्नुहुन्छ तब तपाईको शरिरमा एड्रेनालाईन हर्मोन रगतमा छोड्ने काम गर्छ । यसले दखाईको भावनालाई केही हदसम्म कम गर्ने काम गर्छ । साथसाथै तपाईको शरिरमा एंडोर्फिन नामक प्राकृतिक रसायन पनि शरिरमा छोड्ने काम गर्छ । जसका कारण दुखाई कम हुने तथा मार्फिनजस्तो औषधिको काम गर्ने गर्छ ।